Misy fomba azo antoka ve hanamboarana rindrambaiko avo lenta amin'ny e-varotra?
Ndeha isika hiatrika izany - ny fananganana toeran'ny lam-baomiera avo lenta PR dia tsy mora velively, indrindra fa ny tranokala e-commerce. Ny zavatra dia ankehitriny fa ny ankamaroan'ny teknolojia tranainy dia tsy mahavita manatanteraka izany. Ankoatra izay - mety hanimba ny tetikasan'ny e-commerce ianao. Noho izany, etsy ambany aho dia hametraka lisitra marim-pototra maromaro miaraka amin'ny votoaty sy fitaovana fototra momba ny fandehanana mahomby mba hahatongavana amin'ny alàlan'ny lamin'asan'ny mpampita vaovao PR ho an'ny tranonkalanao. Ireto misy izy ireo - mpitari-dalana voafaritra tsara, fitaratry ny manam-pahaizana, ary bilaogy vahiny.
Fa alohan'ny zavatra hafa, avelao hijery indray mandeha indray - inona ny marketing-vontoatin'ny e-varotra. Tadidio fa matetika ny SEO milaza amintsika fa ny votoaty tsara dia ny mpanjaka, sa tsy izany? Izany dia mampifandray rindrina! Midika izany fa tsy ny famoronana votoaty tsara fotsiny. Mba hahazoana rindran-kira ambony PR manana ny votoatiny, mila manana drafitra toy izao ianao:
mamantatra ny tanjonao eo amin'ny tanjona - misafidy ny fifamoivoizana sy ny fiovam-po;
mieritreritra ny "mpanjifa tsara indrindra", ny filany, ny fihetseham-pony ary ny fikasana;
mitady ny mpitaona ny indostrialy ary manaloka azy ireo;
mamorona ny votoatiny manan-danja indrindra ary manintona amin'ny fomba manintona;
aza adino ny miasa amin'ny fanatsarana ny votoaty alohan'ny hiaingana;
mampiroborobo sy mamerina ny fonosana ao amin'ny votoatinao;
manamboatra fandaharam-potoana amin'ny famoahana ireo gazety ho avy.
Tsy misy zavatra mahasoa kokoa amin'ny fananganana antontan-taratasy ho an'ny mpitondra ambony PR raha ny marina. Midika izany fa rehefa misy olona mila mandre ny feon'ny indostria - nahoana ianao no tsy tokony ho izany? Ny ilainao rehetra dia ny mampiasa fotoana sy ezaka hananganana iray. Aza mahatsiaro ho diso fanantenana anefa, satria tsy voatery ho tonga feo miavaka ianao. Mieritrereta fotsiny hoe ianao amin'ny maha-mpitaiza anao na ny mpikaroka - mampifanaraka ny zava-drehetra ary manome ny tsara indrindra ho an'ny olona. Raha mbola mihevitra izany fampiasam-bola madinidinika izany amin'ny fotoananao ianao, manome toky anao aho fa rehefa mandeha ny fotoana dia misy mpitari-dalana matanjaka iray hitondra anao ny fahefana voajanahary avo lenta ho an'ny mpampita vaovao ao amin'ny fihodinana lava.
Fanampim-pahaizana manokana momba ny fanatanjahantena dia tsy vitan'ny fomba iray ahafahana mivezivezy ankapobeny ny rindran-kira momba ny PR saingy manao fanentanana mahomby ary manangana fifandraisana matanjaka kokoa amin'ny tanjona kendrenao. Ary ny zava-drehetra dia tsotra kokoa noho ny mety hieritreretanao satria ny fikasana dia ny mifidy ny olana ara-drariny na olana. Farany, misafidiana fanontaniana roa ho an'ireo manam-pahaizana hamaly anao. Amin'izany, dia tadidio fa ny tanjonao dia ny hanome valiny amin'ny antsipiriany na ny vahaolana amin'ny dingana manaraka. Raha vantany vao vita izany - manasa fotsiny ny fidirana avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria, ary vita ianao.
Ny fananganana votoatiora avo lenta manokana natokana ho an'ny gazety an-tserasera dia efa fomba iray mahazatra hahazoana fahazoan-dàlana lehibe sasany an'ny PR. Tahaka ny tamin'ny famokarana lahatsoratra tao amin'ny sekoly fanabeazana taloha, ny blaogin'ny vahiny dia fifandraisana eo amin'ny lafiny iray izay manome fahafahana be dia be ho an'ny andaniny roa. Ao no misy ny rafitra votoatim-pirakao fototra miditra ao. Ary ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hampivelatra ny fifandraisana tsara amin'ny mpilatsaka ho an'ny indostria tarihinao, hampitombo azy ireo ny votoatiny, handefa azy io, ary mazava ho azy dia mahazo lohamilina avo roa heny amin'ny tambajotra VI mankany amin'ny tranonkalanao Source .